अन्तिम चरणमा पुगेको नागरिकता विधेयकमाथि अन्तरघात गरेर अध्यादेश - शैली न्युज
१२ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०९:२०
नेकपा खारेज नहुने बेलासम्म झण्डै दुईतिहाइको ओली सरकारले संसद्मा जतिबेला पनि यो विधेयक पारित गर्नसक्ने अवस्था थियो। तर, त्यसतर्फ ध्यान नदिइ यो विधेयक तीन वर्षसम्म संसद्मा अड्काएर यतिबेला अध्यादेशमार्फत यो विधेयक ल्याइएको छ। सरकारको यस प्रवृत्तिलाई नागरिकतालाई कुर्सीसँग साटेको भन्दै विरोध भएको छ।
पारितका लागि अन्तिम चरणमा रहेको यो विधेयक अघि नबढाएर हिउँदे अधिवेशन एउटा पनि विधेयकमाथि छलफल नभई अन्त्य भएको महिनादिन भित्र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ। समितिबाट मतदान गरेर नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि गत वर्षको बर्खे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको थियो।
लघुवित्तको सेयर किन्न बैंकहरुलाई बन्देज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सेयर किन्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै वाणिज्य बैंकहरु, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई लघुवित्तको सेयर किन्न बन्देज लगाएको हो ।
लघुवित्तको सेयर (१० जेठ, २०७७) सोमबारसम्म किनिसकेको भए आगामी पुस मसान्तभित्रै बिक्री गरिसक्न समेत निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक यस्तो बन्देज लगाएको हो ।
यस अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहजै सेयर किनबेच गरिरहेका थिए । अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश जसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लघुवित्तमा लगानी गरेका छन् । संस्थापक सेयरको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
यसैगरी अन्य कम्पनीहरुको सेयर पनि छोटो समयका लागि लगानी गर्न बैंकहरुले नपाउने भएका छन् । ‘सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइनेछ’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको सेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन् ।’
निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको १ प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्नेछन् ।
तर, यसअघि १० जेठसम्म लगानी गरेका सेयर २०७९ असार मसान्तभित्र बिक्री गर्न यस व्यवस्थाले बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।आगामी रणनिती बनाउन विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताको छलफल
काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धन ५ दलका शीर्ष नेताबीच सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटपछि अपनाउनुपर्ने आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा कानुनी लडाइँबारे कसरी अघि बढ्ने र कतिपय सांसदहरुको ठेगानामा भएको त्रुटीलाई सच्चाउने विषयमा पनि छलफल भएको छलफलमा सहभागी काँग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
पाँच दलका तर्फबाट सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र बहुमत भएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेशको माग गर्दै १ सय ४९ सांसदले रिट दर्ता गरेका थिए ।
उनीहरुले यसअघि जेठ ७ गते ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा आधार पेश गरेपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
संसद विघटनविरुद्धको रिटको पेशी जेठ १३ र १४ गतेका लागी तोकियो
काठमाडौं । संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटको पेशी यही जेठ १३ र १४ गतेका लागी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ जेठ १३ गते बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
त्यस्तै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिटको भने जेठ १४ गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ । संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १९ वटा रिट साधारण इजलासमा र ११ वटाको संवैधाानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएको छ ।
जनताको प्रतिनिधि संस्थामाथि आक्रमण हुनु असंवैधानिक ः पूर्वसभामुखहरुको प्रतिक्रिया
काठमाडौं । जनताको प्रतिनिधि संस्थामाथि दुई–दुई पटक आक्रमण हुनु असंवैधानिक भएको पुर्व सभामुखहरुले बताएका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको बैठकमा सहभागी पूर्वसभामुखहरु संविधानअनुसार सरकार गठनका सबै विकल्प प्रयोग नभई संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको बताएका हुन् ।
छलफलमा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, कृष्णबहादुर महरा र रामचन्द्र पौडेल उपस्थित थिए । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने बैठकमा सहभागी भएनन् ।
काठमाडौं । मंगलबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक घटेको छ । आइतबार र सोमबार लगातार बढेको सेयर बजारमा मंगलबार भने करेक्शन देखिएको छ । सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ६ दशमलव ५० अंकले घटेर २ हजार ८ सय १६ दशमलव ५६ अंकमा झरेको छ ।
‘क’ वर्गक कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ४ दशमलव ५१ अंकले घटेर ५ सय ३ दशमलव ९९ अंकमा झरेको छ । सोमबार १३ अर्ब नाघेर इतिहास रचेको कारोबार रकम मंगलबार भने केहि कम देखियो ।
मंगलबार १ लाख १२ हजार १४८ वटा कारोबार हुँदा २१९ कम्पनीका २ करोड ३४ लाख ६५ हजार ६७५ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । जसअनुसार कारोबार रकम ११ अर्ब १३ करोड ३३ लाख ९८ हजार १०८ रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अब अदालतको अवहेलना मुद्दापनि
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्धा पनि परेको छ । अदालतको फैसला नमानी संसद विघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा लिएर कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७९४० बमोजिम हदै सम्म सजाय माग गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्बहालीलाई जसरी पनि असफल गराउने बदनियत राखेको र विश्वासको मतमा पराजित भएपछि प्रतिशोध एवं वदनियतपूर्ण तरिकाले संसद विघटन गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा लिएर गएका हुन् । यो रिट दर्ता भने भइसकेको छैन ।
अदालतको अवहेलनामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म सजायको व्यवस्था छ ।
निषेध आदेश अवधिमै वाणिज्य बैंकले संकलन गरे ४० अर्ब निक्षेप, ३३ अर्ब कर्जा प्रवाह
प्रकाशितः मंगलबार, जेठ ११, २०७८, १४ः२०ः००
ाबअभदययप कजबचष्लन दगततयलतधष्ततभच कजबचष्लन दगततयलकजबचभतजष्क कजबचष्लन दगततयलधजबतकबउउ कजबचष्लन दगततयल
काठमाडौं– निषेध आदेशको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा निषेध आदेश सुरु भएको वैशाख १७ देखि जेठ पहिलो साताको अवधिमा ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन भएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ।
संघले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार यो अवधिमा कर्जाको तुलनामा निक्षेप संकलन बढेको छ। निषेध आदेश सुरु भएको पहिलो साता बैंकहरुले १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए। सोही हप्ता वाणिज्य बैंकहरुले ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको संघको तथ्यांक छ।
त्यस्तै वैशाख चौथो, अन्तिम साता र जेठ पहिलो हप्तामा निक्षेप संकलन क्रमशः १०, २३ र ६ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। त्यस्तै कर्जातर्फ वैशाखको चौथो, अन्तिम र जेठ पहिलो साता क्रमशः १६, १ र ६ अर्बले मात्र बढेको संघले जनाएको छ।
काठमाडौं । विपक्षी गठवन्धनका शिर्ष नेताहरुको छलफल सिँहदरबारमा शुरु भएको छ । संसद विघटनपछिको अवस्थाबारे उनिहरुले लगातार छलफल गर्दै आइरहेका छन् । तर आजको छलफलको विषयवस्तुबारे खलाइएको छैन ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छलफलमा सहभागी छन् ।
नारायणी अस्पताल सप्लायर्सले रासन दिन नसक्ने भनेपछि समस्या
काठमाडौं । बिरगंजस्थित नारायणी अस्पतालमा रासन सप्लाई गर्दै आएका नगनारायण गुप्ताले रासन सप्लाई गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
गत चैत्रदेखीनै रासन सप्लाई गर्दै आएको र २० लाख बक्यौता रकम पुगीसकेको भन्ै उनले रासन सप्लाई गर्न नसक्ने जानकारी गराएका हुन् । उनले भने ‘मैले पनि सामान अरुसँग खरिद गरेर दिने हो, अस्पतालबाट पाउनुपर्ने रकम २० लाख पुगिसकेको छ । घर बेचेर सामान दिन सकिंदैन ।’
निषेधाज्ञाको समयमा घर धान्न मुस्किल पर्ने समयमा अस्पतालमा कुनै सामानको कमी हुन नदिएको भएपनि अस्पतालले सामानको पैसा भुक्तानी नगरेको उनले बताए ।
तर रासन सप्लाई नभए अस्पतालमा समस्या हुने भएको छ । नारायणी अस्पताल हाल संयो विरामी, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीका लागी खाना पाक्ने गरेको छ ।
मंगलबार बिहान नारायणी अस्पतालका डा. उदयनारायण सिंहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, नारायणीको कोभिड किचेनमा बिरामीहरुका लागि खाना पाक्ने गर्छ । रासन सप्लाई गर्ने जिम्मेवारी पाएका महानुभावले एक्कासी भोलिबाट रासन दिन्न भन्छन्, बक्यौता रकम रहेछ भने लेखाले क्लियर गर्छ भन्दा पनि सहयोग नगर्ने मनसाय भएकालाई के भन्ने ? सहयोगीहरुसँग एक पटक फेरि सहयोगको अपेक्षा छ । कोभिड विरुद्धको यो लडाइँ अवश्य जित्नेछौं ।’
‘बेलुका एक्कासी कुकलाई फोन गरेर रासनको सामान सप्लाई गर्न नसक्ने जानकारी गराएछन्,’ डा. सिंहले भने, ‘पैसा नपाएको हो भने लेखासँग कुरा गरौंला, यस्तो परिस्थितिमा हात नझिक्नुस् भनेको मानेनन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत दाता खोजेको हुँ ।’
नारायणीमा एक सय जना कोभिडका बिरामी उपचाररत छन् । उपचारमा खटिने चिकित्सक नर्सलगायत कर्मचारी पनि सयकै हाराहारीमा हुन्छन् । उनीहरु सबैलाई अस्पतालले नै खानाको प्रबन्ध मिलाएको छ । अस्पतालमा बिरामी र चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत कर्मचारीका लागि गरी दुईवटा भान्सा चलिरहेको छ ।
फोक्सोमा पस्यो फलामको टुक्रा, दूरविनद्वारा शल्यक्रिया गरी निकालियो
काठमाडौं । फोक्सोमा पसेको फलामको टुक्राको सफल सल्यक्रिा गरिएको छ । जटिल मानिने फोक्सोको अप्रेसन दूरविनबाटै गरेर पर्साको एक निजी अस्पतालले बिरामीको ज्यान जोगाएको हो ।
कारखानामा काम गर्ने क्रलममा दुर्घटना हुँदा फलामको एउटा टुक्रा उछिटिएर ति व्यक्तिको दाहिने छाती छेडेर भित्र पसेको थियो।
उनि वीरगन्जको एक निजी कारखानामा कार्यरत भारत आसामका पप्पु बोहरा हु्न् । उनको छातीभित्र छेडेर पुगेको फलामको टुक्रालाई दूरविनबाटै सल्यक्रिया गरी निकालिएको हो।
पीडाले छटपटिएका बोहरालाई वीरगन्जस्थित नारायणी वयोधा अस्पतालका चिकित्सक डा. शौरभ शर्माको टिमले दूरविन प्रविधिबाट सफल शल्यक्रिया गरेका छन्।
आफलाई ओलीले गरेको कारवाही औचित्यहीन, अनाधिकारिक र अर्थहीन छ ः नेता नेपाल
काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कानुनी, राजनीतिक तथा सडक आन्दोलनबाट हटाउँदै मुलुकमा कानुनको राज स्थापना गर्ने दायित्व आइपरेको बताएका छन् ।
ओली समूहले सोमबार नेपालसहित ११ नेतालाई पार्टी साधारण सदस्य समेत नरहनी गरी कारबाहीको घोषणा गरेको थियो ।
उनले आफूसहित ११ जना नेतालाई गरिएको कारबाही पनि औचित्यहिन र अनाधिकारिक भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै ओलीले नितान्त व्यक्तिवादी सोच र स्वार्थ पूरा गर्न सरकारको चरम दुरुपयोग गरेको पनि नेपालको आरोप छ ।
काठमाडौं । मालीको सेनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अफ्रिकी संघका अनुसार सेनाले प्रधानमन्त्री मोक्तार औएने र राष्ट्रपति बाह नदालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
सोमबार मालीको सरकार पुनर्गठन भएसँगै सेनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । मालीमा नौ महिनाअघि सेनाले कू गर्दै मुलुकका राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाएको थियो । त्यसपछि सोमबार सरकार पुनर्गठन भएको थियो ।
पुनर्गठनको क्रममा गत वर्ष भएको ‘सैन्य कू’मा संलग्न दुई वरिष्ठ सैन्य अधिकारीलाई सरकारबाट हटाइएको थियो ।
उनीहरुले पुनः सैन्य कू गर्न सक्ने आशंका बढेसँगै सरकारले उनीहरुलाई पदबाट हटाएको थियो । यो अन्तरिम सरकारमा सेनाको ठूलो प्रभाव रहेको भन्दै मानिसहरुले विरोध गर्दै आएका थिए ।
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपालका सातवटै प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको छ ।
आइतबार बसेको संघको राष्ट्रिय समिति, पदाधिकारी, केन्द्रीय पार्षद्को संयुक्त बैठकले सो निर्णय गरेको हो। नेपालमा कोरोना विरामीका लागी अक्सिजन अभाव भएका र अक्सिजन अभावमा ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
सोही अवस्थालाई ध्यानमा राखी कोरोना उपचारमा सहयोग पुराउने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तीव्र रूपमा नेपालमा फैलिरहेको कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न खोप नै अन्तिम विकल्प भएकोले तत्काल अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग खोप उपलब्ध गराइदिन अपिल गर्ने निर्णय पनि एनआरएनए बैठकले गरेको छ।
त्यस निम्ति गैरआवासीय नेपाली संघको राष्ट्रिय समितिमार्फत सम्बन्धित देशका सरकार समक्ष नेपालको लागि खोप उपलब्ध गराउन पहल गरिने छ।
पछिल्लो समय नेपालबाट भारतलगायत अन्य देशका नागरिकले अन्तरराष्ट्रिय यात्राका लागि सुविधा पाएपनि नेपाली भने समस्यामा परेको गुनासो सुनिएकाले यात्रामा नेपालीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न संघले अनुरोध गरेको छ।
विदेशबाट नेपाल फर्कदा नेपाली दूतावासबाट अनुमति लिनुपर्ने लगायत विद्यमान झन्झटिला प्रावधानलाई हटाई यात्रा सहजीकरण गरिदिन समेत सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
मौरी संरक्षणका लागी शरिरमा मौरी राखेर एन्जेलिना जोलीको फोटोसुट
काठमाडौं । हलिउड अभिनेत्री एन्जेलिना जोलीले शरिरमा मौरी राखेर एन्जेलिना जोलीले फोटोसुट फोटोशुट गरेकी छिन् ।
मौरी संरक्षणका लागी सन्देश दिन एक म्यागेजिनले आफ्नो कभरका लागि फोटोसुट गराएको हो । जसका लागि उनले झन्डै १८ मिनेट मौरीहरूलाई आफ्नो जिउमा राखेर बसिन् ।
मौरीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सन्देशसहित एन्जेलिनाले विश्व मौरी दिवसको अवसरमा नेसनल जिओग्राफिक म्यागेजिनका लागि फोटो खिचाएकी हुन्। यतिबेला सामाजिक संजालमा एन्जिलानाको मौरीसँग खिचाएको फोटोले चर्चा बटुलिरहेको छ। फोटो फोटोग्राफर ड्यान विन्टर्सले खिचेका हुन्।
अक्षयको ‘सूर्यवंशी’ अगष्ट मध्यमा रिलिज हुने
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको ‘सूर्यवंशी’ फिल्म अगष्ट १५ मा रिलिज हुने भएको छ । फिल्मका निर्देशक रोहित सेठ्ठी र निर्माता करण जोहारबीच यो मितिमा फिल्म रिलिज गर्ने सहमति भएको हो ।
कोभिड महामारीले बन्द भएका थिएटर खुल्नासाथ फिल्म रिलिज गर्ने तयारी गरिएको छ । फिल्म ‘सूर्यवंशी’ गत वर्षको इदमा रिलिज हुने तयारीमा थियो ।
फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक भएसँगै भारतमा कोभिड महामारी फैलिएपछि फिल्म रिलिज तत्कालका लागि रोकिएको थियो । यो फिल्ममा अक्षयसँगै कटरीना कैफ, रणवीर सिंह, अजय देवगनलगायतका कलाकारको अभिनय छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका इन्सपेक्टर देवीप्रसाद गैरेका अनुसार उनीहरुको शव सालको रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको छ । घटनास्थलको मुचुल्का उठाएर शव पोष्टमार्टमका लागि पठाएको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार उनका श्रीमान रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेको छन् ।